Ukusethela Impumelelo Yokumaketha ngo-2017 | Martech Zone
Ngenkathi isikhathi sikaKhisimusi singahle siqhubeke, njengoba kuhlelwa amaqembu ezisebenzi futhi ama-mince pie enza imizuliswano yehhovisi, lesi yisikhathi futhi sokucabanga ngaphambi kuka-2017 ukuqinisekisa ukuthi esikhathini sezinyanga eziyi-12, abathengisi bazobe begubha impumelelo abayibonile. Yize ama-CMO ezweni lonke kungenzeka ukuthi aphefumula kamnandi ngemuva kowe-2016 oyinselele, manje akusona isikhathi sokunganaki.
Ngonyaka odlule, sibone izikhulu ezinkulu zobuchwepheshe zihlukanisa iminikelo yazo, njenge UberEats, I-Amazon ezitolo zezincwadi futhi Apple ukulahla i-headphone jack, konke okuphoqe amabhizinisi ukuthi acabange ukuthi nawo angaguquka kanjani. Ukubeka phezulu ohlwini lwezihloko okuxoxwe ngazo kakhulu kube yi-Virtual Reality, ezishintshayo kanye ne-ethos yokuqala yokuphonsela inselelo okujwayelekile.
Ukulandela lezi zinqumo zebhizinisi ezisezingeni eliphezulu kanye nezindlela ezintsha, abaholi bamabhizinisi baphoqeleke ukuthi babuze ukuthi hlobo luni loshintsho okufanele bacabange ngalo nabo. Manje yisikhathi sokuba abathengisi babheke ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele bazithathe ukuqinisekisa isipiliyoni samakhasimende ku-2017.
Uma izinqumo zebhizinisi ezithathwe yimikhiqizo emikhulu zisibonisile noma yini kulo nyaka, ukuthi ikhasimende liyisihluthulelo. Okokuqala nokubaluleke kakhulu, abathengisi kumele babe nale ngqondo kukho konke ukutshalwa kwezimali ngo-2017. Kudingeka ukuthi bacabange ukuthi yikuphi okuqukethwe amakhasimende abo akufunayo, ukuthi yini abazohlanganyela nayo kakhulu, futhi mhlawumbe okubaluleke kakhulu, ukuthi bangathanda ukukuthola kanjani lokhu okuqukethwe. Ngokubheka ukuthi bangaxhumana kanjani namakhasimende abo kangcono, ibhizinisi limele ukuzuza uquqaba.
Ukwenza Iselula Ize Kuqala
Ukuphela kwendlela yokuzibandakanya namakhasimende namuhla ukufinyelela kuwo ngezindlela abazisebenzisa kakhulu. Ngabantu abadala abangama-80% base-UK abaphethe i- smartphone akumangalisi ukuthi kumabhizinisi amaningi lokhu kuyithuluzi eliyisihluthulelo ukufinyelela kumsebenzisi wakho wokugcina. Kodwa-ke, sishaqekile ukuthola kwethu kwakamuva Abaphazamisi Bedijithali bika ukuthi ama-36% amabhizinisi asenayo iwebhusayithi ehambayo. Manje yisikhathi sokuba abathengisi baqinisekise ukuthi abaphuthelwa ngokuhluleka ukunikeza inketho yeselula, kanti labo asebenendawo yeselula kufanele babheke ukuthi okunikezwayo kwabo kusebenziseka kalula ngangokunokwenzeka.
Isiza esingumahamba nendlwana kufanele siphathwe ngokubaluleka okufanayo nesiza sedeskithophu. Kumele kube lula ukuzulazula, nazo zonke izici ezitholakala kudeskithophu, futhi akufanele kube nokuxinana noma kube nzima ukuyiqondisa. Lokhu kudinga amamenyu okuskrola, izithonjana, namabha wamathuluzi ajabulisa iso. Lezi zinto zidinga ukuqondaniswa nokuhleleka okunengqondo nolimi olufushane ukuze isayithi leselula lishaye, kepha futhi ligayeke.
Ukukhulisa Ukutshalwa Kwezimali
U-2016 usephonse inqwaba yobuchwepheshe obusha kanye nezindlela zethu zamabhizinisi okufanele azicabangele. Kodwa-ke, ukungena onyakeni omusha, abathengisi kufanele baqaphele ukuthi bangatshali imali kwezobuchwepheshe ngenxa yezobuchwepheshe. Okwe-36% okushiwo kweyethu Abaphazamisi Bedijithali bika ukuthi bakholelwa ukuthi ibhizinisi labo lidinga ukutshala imali eningi kwidijithali ukuze lisungule izinto ezintsha, kubalulekile ukuthi lokhu kutshalwa kwemali kwenziwe ngemuva kocwaningo olunzulu lapho ibhizinisi linamakhono okukhulisa lokho kutshalwa kwezimali futhi kuphela lapho kunqunywe icala langempela lokusetshenziswa.
Landa umbiko we-Digital Disruptor's
Ngaphandle kwalomqondo, ibhizinisi libeka engcupheni yokuchitha imali entweni abangenayo amandla okugcina endlini. Ngokwesibonelo, 53% yabathengisi vuma ukuthi unenkinga yokusebenzisa isoftware yokumaketha ngaphandle kokutshalwa kwemali kokuqala. Ngaphezu kwalokho, okufunwa yikhasimende kufanele kube khona. Uma bengenayo intshisekelo yokwamukela ubuchwepheshe obusha bokuxhumana nomkhiqizo wakho, kuzoba wukutshalwa kwemali okulahlekile.
Ukuze ungene ku-2017 ngecebo eliqinile ledijithali, abathengisi kudingeka bawacabangele wonke la maphuzu. Ukugcina ikhasimende lisenhliziyweni yazo zonke izinqumo, ngenkathi liqhubeka lihlola inani elingalethwa izitayela ezintsha nobuchwepheshe, kusho ukuthi izinkampani zingakha ubudlelwano obuqinile nomsebenzisi wazo, futhi ekugcineni ziqinise ukwethembeka komkhiqizo.
Tags: 20162017CustomerUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiuk
Izinketho ze-Ecommerce Shipping ze-3 ezenza Ukuziphatha Kokuthenga
Dec 20, 2016 ngo-9: 57 PM
Okuthunyelwe okumangalisayo! Siyabonga ngokwabelana.